Akụkọ - Ndị otu anyị meriri Hong Kong gosipụtara ihe ngosi akpụkpọ anụ APLF na 2019
Ndị otu anyị gbagara Hong Kong na Machị 12,2019, wee bido na 3 ụbọchị 'ihe ngosi nke Ahari nke bụ akpụkpọ anụ, Ejiji Akụrụngwa na Ngosipụta Ngwa, A ga-eme ya na Hong Kong Convention & Exhibition Center nke Machị 13 ruo 15. A na-ekewa ụlọ ahụ na ala abụọ, ala ahụ bụ maka ihe eji eji ejiji, dị ka akpụkpọ atụrụ, ajị atụrụ, lambskin.Nke nke abụọ bụ maka Ejiji Ngwa, ụlọ ọrụ anyị dị na ụlọ ngosi a. na-atụgharị gloves akpụkpọ anụ atụrụ, atụrụ abụọ nwere ihu. ime ajị ajị atụrụ, ajị akpụkpọ ụkwụ, okpu ajị atụrụ, ihe mkpuchi atụrụ, akpụkpọ anụ atụrụ Tibet na ohiri isi.
Na nke a ngosi, Anyị zutere ọtụtụ anyị mgbe niile ahịa anyị na-arụ ọrụ ọnụ ọtụtụ years.We ekwu kpam kpam banyere mmepe na-emekarị nke atụrụ akpụkpọ anụ uwe na-eme n'ọdịnihu nke ejiji Ngwa ụlọ ọrụ.A n'otu oge ahụ, anyị na-zutere ọtụtụ ndị ọhụrụ ahịa, Ha na-abịa na-etolite Japan, South korea, Australia, USA, Canada na obodo ndị ọzọ. Ha gosipụtara mmasị dị ukwuu na ngwaahịa akpụkpọ anụ atụrụ anyị.
Karịsịa, Akpụkpọ aka ajị atụrụ anyị ji aka anyị mee, okpu ajị atụrụ atụrụ, nke dị nro na nke na-adịgide adịgide ụmụaka booties.Na oge elekere, anyị gara ileta akụrụngwa akpụkpọ anụ na-egosi ebe a na-akụ azụ. zụta atụmatụ nke ụfọdụ akpụkpọ anụ atụrụ dị elu. ya mere, ọ dị mma ịchọta ngwaahịa akpụkpọ anụ & ngwa ejiji si ebe a.
Kemgbe e guzobere ụlọ ọrụ ahụ na 2002, ndị otu anyị na-agbaso mbọ aka ajị atụrụ na nke akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ. Anyị gbagara Hong Kong, gbagoo USA, fega .Wtali.M mere ihe ndị a niile maka ịmụ echiche echiche mba ụwa kachasị ọhụrụ, spghọta ihe ndị kachasị mma na-ewu ewu ejiji. Offcuse, kwa maka ịmatakwu mkpa nke ndị ahịa na-agbanwe agbanwe.in wee mepụta ma mekwaa gloves akpụkpọ anụ kwesịrị ekwesị. Naanị anyị na-eme mkpuchi gloskin nwere ike ịmị ndị ahịa ahịa. Higher gbagoro n’elu, ị ga-ahụ ebe dị anya. Ya mere, Enyemaka ọ bụla, Biko egbula oge ime ka m mara. Anyị ga-eme ike m niile iji nyere gị aka.